MB 2016 May, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Bisha Taariikhda Madoow waxaa halkan lagu qabtaa Mareykanka bishii kasta (Bisha Taariikhda Dhaqanka iyo Taariikhda Dhalashada Mareykanka) Inta lagu guda jiro waqtigan, waxaan u dabaaldegeynaa guulaha badan ee ay dadka Mareykan Afrikaanku ka geysteen daryeelka wanaagga umadeena. Waxaan sidoo kale xusaa dhibaatada jiilalka soo jireenka ah, laga bilaabo addoonsiga, kala sooca midab-kala-sooca ilaa cunsuriyadda socota. Bishan waxaan garowsaday inay taariikh ku leedahay Kaniisadda oo badanaa la iska indhatiray - doorka muhiimka ah ee kaniisadihii hore ee Mareykanka ee Mareykanka ka ciyaarayeen jiritaanka caqiidada masiixiga.
Waxaan helnay adeegyo cibaado oo Mareykan Mareykan ah tan iyo bilowgii Mareykanka! Kaniisaddii Ameerikaanka ee ugu horreeyay waxay taariikhdu ahayd 1758, kahor Dagaalkii Sokeeye. Kaniisadahaan hore waxay ku soo if baxeen harqoodkii foosha xumaa ee addoonsiga. Milkiilayaasha addoonsigu waxay ka shakin jireen nooc kasta oo abaabulan oo ka dhex dhaca adoomaha; laakiin in kasta oo silcin xun, qaar badani waxay heleen beel xoog, rajo leh, iyo soo noolayn ka mid ah waxbarista injiilka.
Qayb kale oo dhaxal gal ah oo horumarsan oo ka dhashay adkaysiga iimaanka ee ka hooseeya addoonsiga ayaa ahaa injiilka. Sida laga maqli karo caqiidooyin fara badan oo duug ah, Masiixiyiinta addoonsiga ah waxay ka heleen aqoonsi xoog leh sheekadii Muuse ee reer binu Israa'iil ka soo saaray Masar si ay u geeyaan dhulkii loo ballanqaaday. Afrikan-Mareykankan waxaa lagu xoojiyay xaqiiqda ah in dadka Ilaah doortay ay sidoo kale addoonsadeen iyo in Ilaah iyaga u horseeday xorriyad beel caqiido ah. Rumaystayaashani waxay horay u ogaayeen waxyaabihii ay reer binu Israa'iil soo mareen waxayna ku dhejiyeen rajadooda madax furasho weligeed ah isla isla Ilaaha.
Kaniisadaha Ameerikaanka Afrikaanka ah ayaa weli ah meelaha loogu dabaaldego Masiixiyiinta iyo bulshada ilaa maanta. Hoggaamiyaasha Masiixiyiinta Mareykanka-Mareykanka ah waxay safka hore kaga jiraan dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga waxayna sii wadeen inay u doodaan isbeddelada waaweyn ee ku saleysan mabaadiida masiixiga. In kasta oo aan badanaa u dabaaldegno mudnaanta shaqsiyaadka Bisha Taariikhda Madow, haddana waxaa si la mid ah qiimo u leh in la xasuusto hadiyadihii waaweynaa ee ay soo mareen kaniisadaha muddada dheer. In kasta oo Kaniisadihii hore ee Mareykanka Ameerika ay sii wadeen inay dhaxlaan cibaadada, daryeelka xoolo-dhaqatada, iyo bulshada, waxay muddo dheerba ku noqdeen qayb ka mid ah caado aad u ballaaran oo caqiido dhexdeeda ah oo ka dhex jirtay Kirishtaanka oo taariikhdii u horreysay Masiixiyiintii ugu horreeyay.
Mid ka mid ah kuwii diinta ugu horreeyay ka dib sarakiciddii Ciise - xitaa kahor Rasuul Bawlos! - wuxuu ahaa bohonkii Itoobiya. Xisaabtuna waxay ku jirtaa cutubka 8aad ee Falimaha rasuullada. “Malaa'igtii Rabbiga” ayaa Filibos u sheegay inuu ku tago wado cidla ah oo Gaasa u gudda. Halkaas ayuu kula kulmay nin xoog badan oo ka socda Itoobiya oo xafiis weyn ka qabtay maxkamadda boqoradda. Ninku wuxuu horey u bartay marin ka mid ah kitaabka Ishacyaah markii Filibos u soo dhowaaday dhinaca Ruuxa Quduuska ah oo uu la sheekaystay isaga. Wuxuu "ku bilaabay eraygan Qorniinka oo isaga ku wacdiyey injiilka Ciise" (Aayadda 35). Muddo yar ka dib bohonku waa la baabtiisay oo «si farxad ah ayuu jidkiisii ​​ugu tegey» (Luther 1984).
Culumada ayaa u arkeysa warbixintan inay tahay sawir qurux badan oo ku saabsan sida injiilku ugu faafay dunida darafyadiisa. Tani waxay sidoo kale muujineysaa go'aan hore oo cad oo muujinaya in dadka ka soo kala jeeda qowmiyado kala duwan, quruumo, dhaqamo iyo asal ahaan si isku mid ah loogu soo dhoweynayo Boqortooyada Masiixa. In kasta oo aynan hubin in la caddeeyo, qaar ka mid ah caadooyinka Masiixiyiintii hore waxay u sababeen faafinta warka wanaagsan ee Ciise ku yimid bohommada Itoobiya ee ku yaal qaaradda Afrika.
Waxaan jecelahay inaan barto taariikhda kaladuwan ee firfircoon ee cibaadada masiixiga ee adduunka maxaa yeelay waxay i xasuusineysaa dhaxalkeenna qani ah iyo kala duwanaanta. Anaga oo ah GCI sidoo kale waxaan qayb ka nahay dhaqankan socda. Grace Wadaag Caalami ah ayaa si weyn uga faa'iideysata midnimada kala duwanaanshaha xubinnimadayada. Waxaan leenahay kaniisado ku kala baahsan adduunka oo dhan oo waxaan la kulannaa cajiib, Ilaah-sameeyay, koboc caalami ah. Sannado yar gudahood, waxaan soo dhoweynay 5.000 xubnood oo cusub iyo 200 jameeco cusub, oo ay ku jiraan kaniisado badan oo ku yaal qaaradda Afrika! Waa wax la yaab leh sida dadka leh qowmiyado kala duwan, aqoonsi wadaniyadeed iyo waaya-aragnimo nololeed ay ugu midoobi karaan cibaado isku mid ah Ilaah. Runtii kaniisadda way sii xoojineysaa haddii aan qiimeynno hadiyadaha kala duwan iyo horumarka taariikhiga ah ee ku jira jidhka Masiixa. Ilaaheenna ayaa ah kan noogu yeedhay inaan jebinno carqalada oo aan uga shaqeyno midnimo ka dhex dhalata kaniisada dhexdeeda ku saleysan nolosheena cusub ee Ciise Masiix.
Anigoo ku mahadnaqaya taageerada walaalahayga ku dhex jira Masiixa,